Sunday May 19, 2019 - 15:08:51 in Maqaallo by Abdikarim Saed Salah
Maxaad Ka Taqaan Mahadhadii Taariikheed EE General Maxamed Xasan Cabdilaahi (JIDHIF)? Q.2aad Maalmihii Halgankii ilaa uu Markuu Gaadhay heerka ugu sareeya Ciidamada Somliland
Major Genaral Maxamed Xassan Cabdilaahi(Jidhif): markii xabsiga loo taxaabay waxuu xidhnaa muddo shan sano ah.waxaana la sii daayay 1987 isla markii jeelka laga sii daayayba kuma hakan magaaladee judhiiba wuu ka huleelay wadanka waxaanu u hubqaatay inuu ku biro halgankii hubaysnaa ee lagala soo horjeeday Taliskii Siyaad Barre ee Jabhadii Snm Hormoodka ka ahayd. Habeen madaw ayuu ka soo baxay magaaladii muqdisho ilaa magaalada Feer-feer ee Ku Taal Xadka itoobiya iyo Somaaliya. isagoo ku lebisan khamiis iyo cumaamad garabkana sudhay kitaab iyo wayso .waxa kale oo uu sitay macawiso ay xidhaan dadka deegaankaasi ku nool iyo jiheeye uu tilmaansado. Sidaa waxuu ugu labistay si aanay dadka deegaanku uga shikiyin. Alla waa nabad galiyay oo waxuu isagoo cagaihiisa ka maalaya ka gudbay kun iyo dhawrka boqol ee kiiloomitir ee ay iskau jiraan muqdisho ilaa feer feer.
Markuu sidaa uga sootalaabayxadkii waxuu iska xaadireyay xaruntii snm ay ku lahayd magaalada Mustaxiil.kadibna waxuu u sii gudbay xaruntii u weynayd ee SNM oo ahayd baligubadle.
Badhtamihii sanadkii 1988kii ayaa waxaa jabhadii snm ku yara fool adkaaday dagaalkii ay ka wadeen jiida ku teedsan xadka itoobiya kaasi oo ahaa in jiha kaliya laga weeraro taliskii siyaad bare. Sidaasi awgeed ayaa waxaa la go,aaamiyay in xaga xeebta galbeed jabhadu ka bilowo dagaal.
Sidaasi ayaa dabayaaqadii 1988kii lagu aas aasay guutadii 99aad ee SNM. isla markaanamarkii talo la rogrogay Ayaa Gudoomiyihii SNM Ee Wakhtigaa Mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud(Siilaanyo) iyo xoghayihii gaashaandhiga Mujaahid Cabdilaahi Asker allaha u naxariistee, waxay isla garteenInay Guutadaa U Magacaabaanmujaahid Maxamed Xassan Cabdilaahi(Jidhif). Maxaa yeelay Jidhif waxuu ahaa dad iyo dalyaqaan aqoon durugsan u leh deegaanada xeebta galbeed .oo muddo badan ayuu ka shaqaynayay waa markii uu u shaqaynayay shirkadii chavrol ee shidaalka baadhi jirtay.
Guutadan 99aad Ee Jidhif hogaaminayay waxay ahayd guutadii ugu halista badnayd ee dagaaladii ugu qadhaadhaa ku qaaday taliskii siyaad barre.hadaad maqasho kaadidayda ayaan u soo cabay mujaahid Snm ah oo leh waa Guutadan 99aad waayo iyaga oo kaliya ayaa xeeb ka dagaalamayayiyo deegaan kulul oo kaadida la cababayo.
Genaral Maxamed Xasan cabdilaahi(Jidhif) markii la magacaabay waxuu xilka tirsaday Guutada 99aad oo ka kooban ilaa 400 oo ciidanka lugta ah wax tikniko ahna waxay haysteen hal gaadhi oo iska rogo ah iyo gaadhi qori baron ah saran yahay.waxaanu ahaa aaga masuuliyada guutadu: Jihada Galbeed ka Soobilow Geestiir ILaa xaga barri laga gaadhayo Buluxaar ,jihada waqooyi ; Lughaya,tokhoshi,saylac,ilaa lawyacado. Jihada koonfureedna ,Geerisa,Ceel La Helay,Bildhaaley,gargaara Bari,geerisa gargaara galbeed ilaa jidhiilaa cabdi qaadir iyo xariirad.
Waayaha iyo xaalka janaraal Jidhif iyo Guutadiisa 99aad oo sidaa ah ayaa waxa dabayaaqadii 1988kii guluf ku soo qaaday ciidamadii ugu tirade badnaa uguna tayada fiicnaa ciidamadii talskii Maxamed Siyaad Barre waxaanay ka soo weerareen bad iyo bariba waxaana halkaa ku dhex maray dagaalkii xeebaha oo ah dagaalkii ugu qadhaadhaa ee dhex maray Taliskii Siyaad Barre iyo SNM.
Dagaalka Xeebtu Waxuu ahaa dagaalkii ugu xumaa uguna xaragada Badnaa waxuu socday sodon bilood oo xidhiidh ah oo aan fooda la kala qaadin waxaana isku haleelay Genaraal Maxamed Xassan Cabdilaahi (jidhif) oo wata Guutadii 99aadoo ka kooban afar boqol oo ciidan ah wax tikniko ahna haysta laba gaadhi mid suug ah iyo mid baron saran yahay.Iyo Cabdi Casiis Cali Barre oo HogaaminayaGuutadii 77aad iyo Kamaandooskii Ciidamadii xooga dalka soomaaliya . oo ka kooban afar kun oo ciidanka lugta ah oo ku gaashaaman 117 gaadiid tikniko ah oo ahaa gawaadhidii ugu casri sanaa sahaydooda iyo saanadooduna u dhamaystiran tahay.
Bilowgiiba janaraal jidhif waxuu fashiliyay qorshahii dagal ee ciidamada taliska maxamed siyaad barre oo ahaa in bariga uu ka weeraro Ciidamada Cabdi casiis oodhan 4200 xaga bada iyo xeebtana aya kaga soo dhuftaan ciidan uu markab siday oo u watay gnaral morgan oo dhamaa ku dhawaad laba kun oo askari. Waxaanu helay xogtii ciidanka markabku soo dhigayo lughaya kadib way u kaadiyeen ilaa ay markabka ka soo dhamaanayaanmarkay soo wada dageen.ayaa janaraal jidhif oo wata looma ooyaankii guutada 99aad weerar ku culus ku soo qaadeen waxaanay ka dhex tooseen waabarigii.markii dhan walba rasaastii kaga rideen ciidankii morgan oo warla waxay qadeen sas iyo jaahwareer kadibna jaanta ayay wadheen halkaa si ba,an ayay ugu jabiyeen ciidamadii moorgan waxayna ka qabteen maxaabiistii ugu tirade badnaa ee abid snm daaal ku qabato uwaasi oo dhamaa ilaa 700 oo askarioo uu ku jiro kornaylkii watay waxaaka badbaaday waxyar oo morgan ku jiro oo firxaday. Halkaasna waxay ka heleen hub iyo saanad badan.
Intaasi kadib waxaa soo caga dhigtay cabdi casiis oo wata ciidamadii cartamayay islamarkaaana soo galalafay fadhiisamadii snm ku lahayd xaduudka itoobiya oo libin sita islamrkaana wxuu xeebtii ku abaaray jidhif oo isna dhirbaaxo kulul ku dhuftay moorgan iyo ciidankiisii.waana labada nine e dagaalka ugu xun ee xeebuhu dhexmarayaan.waa laba sarkaal oo isku kuliyad ahaa balse duruufta ay ku kala sugan yihiin ayaa kala duwanayd.
Jidhif markuu arkay inaanu marnaba cabin karayn ciidanka cabdicasiis bilowgiiba waxuu u baneeyay dhamaan deegaanadii xeebta waxaanu qasab ku jiidhay xadka jabuuti iyagoo u gudbay dhanka itoobiya. Waxaanu sidaa u yeelay xeelad dagaal.
Kadib ciidankii cabdi casiis waa ay wada qabsadeen dhulkii xeebta oo dhan waanay is balaadhiyeen.waxaanay u qaateen inay sidaa ku jabeen jabhadii.
Hasayeeshee janaraal jidhif intuu u talaabay itoobiya ayuu isku soo dubritay ciidankiisii islamarkaana xal u soo helay mushkilad ka haysatay xaga sahayda iyo saadka iyo saanada maxaa yeelay ma ay jirin meel ay snm u soo marisaa waxaanu xidhiidh toos ah la sameeyay ciidamadii itoobiya markaasi ayuugeneral getaaju oo ahaa taliyihii ciidamada harargee waxuu u ogolaadayin toos loo siiyo waxkastoo ay u baahdaan isagoo u furay wadada tareenka.
LA Soco …….
F.G:Cid kastoo xog ka haysa dagaalkaa xeebaha waxaan ka codsanayaa inay ila wadaagto iyagoo iigu soo hagaajin kara cinwaankayga hoos ku xusan
Qalinkii:Cabdikariim Muxumed Cadde(Qaamuus)